အဆင့် 2: နည်းပြဆန္ဒပြ | နည်းပြ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအစည်းအရုံး
IAC®သည်အဆင့်နှစ်ဆင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုပေးသည်။ ကျွမ်းကျင်သောအသိအမှတ်ပြုကျွမ်းကျင်သောနည်းပြများနှင့်မဟာကျွမ်းကျင်မှုနည်းပြများ (MMC) ။ Coaching Masteries ™ကိုသင်သရုပ်ပြသည့်အဆင့်သည်သင်မည်မျှအောင်မြင်သည်ကိုဆုံးဖြတ်သည်။ သို့ဆိုလျှင်သင်မည်သည့်အသိအမှတ်ပြုမှုကိုသင်ရရှိမည် - Certified Masteries Coach သို့မဟုတ် MMC ရှိသည်။
သင့်ရဲ့နည်းပြ session ကိုအသံသွင်းတင်သွင်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်. မှတ်မိဖို့အရေးအပါဆုံးအရာတစ်ခုမှာသင်အသံသွင်းအသုံးပြုချင်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးသရုပ်ပြတခုအဖြစ် အဆိုပါ9နည်းပြ Mastery ™၏။
အဆိုပါနည်းပြ Mastery ™, အပြုသဘောဆိုင်းလွယ်ကူချောမွေ့မိမိကိုယ်ကိုအသိတရားတိုးပွားစေ, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထိုးထွင်းသိမြင်မှုမြှင့်တင်ရန်နှင့် client ကိုရဲ့ရည်ရွယ်ရလဒ်များကိုဆီသို့အဓိပ္ပါယ်ရှိသောတိုးတက်မှု generate ဖို့ဒီဇိုင်းနေကြသည်။ အပြည့်အဝကိုသင့်နည်းပြသို့ပေါင်းစည်းပြီးတာနဲ့သင်ကသဘာဝကျကျသူတို့ကိုသုံးစွဲဖို့ "ကွိုးစားပါ" ဟုရှိခြင်းသို့မဟုတ်စကားပြောဆိုရန်အတွက်သူတို့ကိုအတင်းအကျပ်မရှိဘဲအားလုံး9နည်းပြ Mastery ™ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။ ရုံကဒီဘွဲ့သူတို့ကိုသင်ယူနားလည်ရန်အချိန်နှင့်အလေ့အကျင့်ကြာကိုသတိထားပါ။ ဒါဟာသင့်ရဲ့နည်းပြ၏စတိုင်လ်, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘဲအများဆုံးကြှမျးကနည်းပြကျွမ်းကျင်မှုများ၏ပေါင်းစည်းမှုနဲ့ဘာမှရှိပါတယ်။
အဆိုပါ #1 အမှားနည်းပြအဆင့်2အတွက်လုပ်ပထမဦးဆုံးကိုယ့်ကိုကိုယ်အကဲဖြတ်သည့်အသံသွင်းသူတို့လက်မှတ်-ထိုက်တန်ဖြစ်ကြပြီးသူတို့သည်သင်တို့ကိုအကောင်းဆုံးအလုပ်တခုအဖြစ်လျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်မရှိဘဲအသံသွင်းတင်သွင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပြီးလမ်းညွှန်မှုအဘို့, "ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အဆင့်2ပြင်ဆင်နေများအတွက်အကြံဉာဏ်ကို "နှင့် "မှတ်တမ်းများလုံလောက်ကောင်းရှိပါသလားရှိလျှင်ဆုံးဖြတ်နည်း" အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော။
အချိန်ကသင်ပြီးသားသင့်ရဲ့သရုပ်ပြကြ2အဆင့်အဘို့သင့်အသံသွင်းတင်ပြရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ ပညာတတ် အွန်လိုင်းစမ်းသပ်မှု (အဆင့် 9) မှတဆင့် 1 နည်းပြ Mastery ™၏နားလည်မှု။ အဆင့်2၌သင်တို့ကိုသင့်လျော်စွာနှင့်ထိရောက်စွာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ (မှတျတမျးတငျထား) နည်းပြအစည်းအဝေးများအတွက် Mastery တစျဦးစီလျှောက်ထားရန်သင့်စွမ်းရည်သရုပ်ပြရ။
အပိုင်း2များအတွက်ပြင်ဆင်ထားရန်, သင်ကျယ်ကျယ်ကျင့်သုံးခြင်းနှင့် Mastery အသုံးပြုရန်သင်၏စွမ်းရည်ကိုပိုမိုလွယ်ကူနှင့်ပိုပြီးသဘာဝအလျောက်ဖြစ်လာအဖြစ်သင့်တိုးတက်မှုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုပေမည်။ နည်းပြကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်နည်းပြကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာလက်တွေ့ကျတဲ့အတှေ့အကွုံအမြားအပွားနာရီလိုအပ်သည်။
သင်တစ်ဦး၏ဘေးကင်းမှုအတွင်းတစ်ဦးရဲ့ buddy နည်းပြ (သင်မီနူးထဲမှာ link ကိုတဆင့်အနေနဲ့ပိတ်ပင်နည်းပြများအတွက်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်), တစ်နည်းပြ triad (နည်းပြ, client ကိုနှင့်တုံ့ပြန်ချက်ကမ်းလှမ်းတဲ့သူလေ့လာသူများရှိရာ3နည်းပြအခြားအနေအထား) နဲ့လေ့ကျင့်ဖို့လိုပေမည် လေ့လာမှုအုပ်စုတစ်စုဒါမှမဟုတ်ဆရာနည်းပြသုံးပြီးနှင့် / သို့မဟုတ်တစ်နည်းပြသင်တန်းအစီအစဉ်တက်ရောက်ခြင်း။ မသာပါကအခြားသူများအားတုံ့ပြန်ချက်သင့်ရဲ့နားလည်မှု ပို. ရငျ့ပေး, တုံ့ပြန်ချက်ကိုလက်ခံရရှိရန်အထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မည်။
အဆိုပါပိတ်ပင်ကွဲပြားအခြေအနေများနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်အတူ9Mastery လျှောက်ထားသရုပ်ပြ, သင့်နှစ်ခုကိုတင်ပြဘို့နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသော client များကျင့်ညွှန်ကြားပေးခြင်းရန်သင့်အားလိုအပ်သည်။
သင့်ရဲ့မှတ်တမ်းတင် 45 မိနစ်ထက်ကျော်လွန်လျှင်, နေကြသောအဖွဲ့အစည်းများအစစျဆေးကိုသာမှတ်တမ်းတင်၏ပထမဦးဆုံး 45 မိနစ်ဂိုးသွင်းလိမ့်မယ်သတိပြုပါ။ အဆိုပါ2သုံးပြီးအပိုင်း 30 များအတွက်လေ့ကျင့်ပါ - 45 မိနစ်လမ်းညွှန်နည်းပြအလုပ်ကိုနေစဉ်။ ကြာကြာအစည်းအဝေးများသင့်ရဲ့နည်းပြစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်မသင့်လျော်မဟုတျပါ, သို့သော်လက်မှတ်၏ရည်ရွယ်ချက်, 45 မိနစ်ထက်မပိုဘူးအစည်းအဝေးများသို့တင်ပြရန်။
ငါတို့သည်လည်း (သင်တန်း၏, client ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်) အားလုံးကိုသင့်အစည်းအဝေးများဖြစ်ကောင်း, မျိုးစုံနည်းပြအစည်းအဝေးများမှတ်တမ်းတင်ဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။ သင့်ရဲ့နည်းပြအစည်းအဝေးများပြန်လည်သုံးသပ်မှာအကောင်းဆုံးသင်ယူမှုအချို့ကိုပေးနိုင်ပါသည်။ သင်သည်သင်၏နည်းပြအစည်းအဝေးများမှတ်တမ်းတင်အဆင်ပြေလာတဲ့အခါသင်အဆင့်2များအတွက်မှတ်တမ်းတင်နေသောအချိန်အားဖြင့် "ဖျော်ဖြေ" နေကြတယ်နဲ့တူနှင့်, သင်တို့ကိုမခံစားရပါလိမ့်မယ်။
မည်သည့်ကျောင်းများ, လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များသို့မဟုတ်လမ်းညွှန်နှင့်အတူဆက်နွယ်ဘဲ, အIAC®လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးလွတ်လပ်သောလက်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်သတိရပေးပါ။ ကျနော်တို့လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များအတွက်အသုံးပြုမှုအတွက် Mastery များ၏ content လိုင်စင်လုပ်ပေးနေစဉ်, ကျမတို့ကလည်းဘယ်အစီအစဉ်များကိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားသောကြသည်မဟုတ်။
ဒါဟာ Mastery အပေါငျးတို့သအကြောင်းအရာများဒေသများနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသင့်ရဲ့နည်းပြသင်တန်းသို့မဟုတ်ကျောင်းသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေဖုံးလွှမ်းစေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်သည်။ IAC®လက်မှတ်အထက်နှင့်သင့်အခြေခံလေ့ကျင့်ရေးထက်ကျော်လွန်သွားနှင့်အဆင့်2အပေါ် curriculum.Your အောင်မြင်မှုကသင်၏နည်းပြဆရာတစ်ဦးရောင်ပြန်ဟပ်မှုမဟုတျပါဘူး - ဒါကြောင့် Mastery သရုပ်ပြရန်သင့်စွမ်းရည်ကိုတစ်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်သင်နှင့်သင့်ပြင်ဆင်မှုအပျေါမှာမူတည်ဒါ။ အကြံပြုထားတဲ့ပစ္စည်းများနှင့်အတူအလုပ်မလုပ်ခြင်းနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကျင့်သုံးရန်နှင့်လေ့လာမှုမှလုံလောက်သောအချိန်ခွင့်ပြုပါ။ ဒါကဒါကြောင့်အောက်ပါအကြံပြုချက်များကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်လျှောက်ထားပါလူတစ်ဦးအနေဖြင့်လူတစ်ဦးမှကွဲပြားပါလိမ့်မယ်။
အဆင့်2ဘို့ပြင်ဆင်နေဘို့အကွံဉာဏျ:
သင်နှင့်သင့် client များအတွက်ကိုယ်ပိုင်ဝိညာဏ်အချက်ကိုဖယ်ရှားနိုင်အောင်, သင့်နည်းပြအစည်းအဝေးများအပေါငျးတို့သမှတ်တမ်းတင်များ၏အလေ့အထကိုရယူလိုက်ပါ။
သငျသညျခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းတင်ရန်သင့် client ကိုရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရသေချာအောင်လုပ်ပါ။ နှုတ်ဖြင့်ပိတ်ပင်လက်မှတ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်နည်းပြ session ကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့ခွင့်ပြုချက်အဘို့သင့်ကို client တောင်းတစ်ခုချင်းစီကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသော session တစ်ခုစတင်ဖို့။ သင်တို့သည်လည်း (ထိုသူတို့လျှို့ဝှက်၏စွန့်လွှတ်လက်မှတ်ထိုးရှိခြင်းအသုံးပြုပုံပိတ်ပင်အတူ session ကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်မျှဝေဖို့သူတို့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရှာမလိုအပ်ပါလိမ့်မည်လျှို့ဝှက်၏စွန့်လွှတ်အဘို့ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ) ။ ဤစာရွက်စာတမ်းတစ်ခုချင်းစီကိုမှတ်တမ်းတင်နဲ့အတူတင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။
သင့်ရဲ့အသံသွင်းနားထောင်ပါ, တစ်ဦးဆရာနည်းပြဒါမှမဟုတ်9ပိတ်ပင် Mastery, triad အသင်း၏အသုံးပြုမှုအတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားသည်အခြားနည်းပြသူတို့နှင့်အတူမျှဝေလေ့လာမှုအုပ်စုတစ်စုသို့မဟုတ်နည်းပြ buddy ။
ကိုယ်ပိုင်သင်၏အမှာတွေ့ရတဲ့ Mastery မှတ်စုစာရွက်နှင့်မှတ်စုများ, အသုံးပြု. ဂိုးသွင်း အဖွဲ့ဝင် Dashboard ကို။ သငျသညျသငျ့လျြောစှာသူတို့ကိုလျှောက်ထားခြင်းရှိမရှိ, ပစ္စုပ္ပန် ရှိ. , client ကိုတစ်ဦးပြောင်းကုန်ပြီကိုဖန်ဆင်းသို့မဟုတ်သင် Mastery သုံးပြီး၏ရလဒ်အဖြစ်သိသာထိုးထွင်းသိမြင်ခဲ့ရှိမရှိအဆိုပါ Mastery ၏ထားတဲ့ချွတ်စစ်ဆေးပါ။
တိကျတဲ့ Mastery သုံးစွဲဖို့လွဲချော်ခွင့်အလမ်းများကိုရှိခဲ့သည်လျှင်သတိပြုပါ။ ပျောက်ဆုံးသို့မဟုတ်မသင့်လျော်သို့မဟုတ်ထိရောက်မှုအသုံးပြုခဲ့ကြသည်သော Mastery သားထားပါ။ သင်က Mastery နှင့်အမျိုးမျိုးသောအခြေအနေတွေအတွက်၎င်း၏အသုံးပြုမှုကိုတစ်ဦးပိုမိုနက်ရှိုင်းဆုပ်ကိုင်ရမယ့်အဆင့်အတန်းကိုယူချင်ပေမည်။
သငျသညျပေးထားသောအခြေအနေမှာစနစ်တကျ Mastery ကိုသုံးပါကကူညီလိမ့်မည်ဟုအချို့မေးခွန်းများကိုဖွံ့ဖြိုး။
သင်နှင့်အတူအကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်သင့်ရဲ့ဖောက်သည်ဖြစ်သောဆုံးဖြတ်သင်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်လုပ်ငန်းစဉ်၏ရည်ရွယ်ချက်အဘို့မိမိတို့နည်းပြအစည်းအဝေးများမှတ်တမ်းတင်နိုင်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုမေးကြည့်ပါ။ တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲနှင့်သင့်နည်းပြဖြင့်နောက်တော်လိုက်ရန်အဆင်သင့်နေသောကျန်းမာ, မတ်, action ကို-oriented တစ်ဦးချင်းစီ: စာမေးပွဲဖြေဆိုရည်ရွယ်ချက်များနေသော clients များကိုရွေးချယ်ပါ။ သင့်ရဲ့လက်မှတ်အသံသွင်းဘို့, စံပြ client ကိုသင့်ရဲ့နည်းပြ၏ရလဒ်အဖြစ်တိုးတက်မှုစေသည်။ အလွန့်အလွန်ဖမ်းသို့မဟုတ်ရှုပ်ထွေး client များသည် Mastery အများစုသရုပ်ပြထံမှသင်တို့ကိုစောင့်ရှောက်စေခြင်းငှါ။
ထိထိရောက်ရောက်ခေါ်ဆိုခဒီဇိုင်းရေးဆွဲ: တစ်စအဦး, တစ်ဦးအလယ်တန်းနှင့်အဆုံးသတ်ဖူး, 30-45 မိနစ်အတွင်းမှာသော client ကိုများအတွက်ပြောင်းကုန်ပြီသို့မဟုတ်နောက်တစ်ကြိမ်မခေါ်မီယူခံရဖို့အရေးယူမှုအချို့ကိုမျိုးအတွက်ရလဒ်များ။
အဆိုပါအသံသွင်း "အလုံအလောက်ကောင်းသော" မှန်လျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်ဘယ်လို
မှတ်စုစာရွက်သုံးပါနှင့် 1 မှ5တစ်စကေးအပေါ်တစ်ခုချင်းစီကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာဂိုးသွင်း။ အမှတ်ပေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်တစ်ဦး Mastery မှားယွင်းစွာအသုံးပြုခဲ့သည်လျှင်, Mastery ၏လိမ္မာသရုပ်ပြများအတွက် 1 ဂိုးသွင်း, နှင့် Mastery ၏ကြှမျးကသရုပ်ပြများအတွက်3ဂိုးသွင်း5ဂိုးသွင်း။ မှတ်စုစာရွက်ရရှိနိုင်ပါသည်
, သင် Mastery E-စာအုပ်ထဲတွင်အပိုင်းကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြင့်သင့်လျော်စွာအဆိုပါ9Mastery ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြသေချာအောင်လုပ်ပါ "အညွှန်းကိန်းဟာနည်းပြအဆိုပါ Mastery နားလည်နိုင်သည်" နှင့်တစ်ဦးချင်းစီ Mastery အပိုင်းပြီးနောက်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်ရသော "ဘုံအမှားနည်းပြ Make" ။
တိကျတဲ့ Mastery သုံးစွဲဖို့လွဲချော်ခွင့်အလမ်းများကိုရှိခဲ့သည်လျှင်သတိပြုပါ။
သင့်ရဲ့အသံသွင်းမရှိတော့ 45 မိနစ်ထက်ဖြစ်ကြောင်း Verify ။
ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ: သင်၏ခေါ်ဆိုခသို့ Mastery အတင်းဖို့ကြိုးစားမနေပါနဲ့။ ဒါဟာသိသာနှင့်ထိရောက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ဆောင်ပြီး "စမ်းသပ်လွန်သွား" ရန်သင့်အစီအစဉ်၏သွားကြကုန်အံ့့သင့်ရဲ့သဘာဝကနည်းပြလုပ်ပါ။ သငျသညျအဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီသောအခါ,9Mastery အားလုံးအတော်လေးသဘာဝပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်လိမ့်မည်နှငျ့သငျလွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူရှောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါပိတ်ပင်မယ်ဆိုရင်စံချိန်တင်နည်းပြ session ကိုတင်သွင်းခဲ့တဲ့အသံကြောင့်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ကျနော်တို့တင်ပြအခြား session တစ်ခုတောင်းဆိုရန်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးကိုဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်လိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းမညျဖွစျကွောငျး, edited scripted, ဒါမှမဟုတ်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ အော်ဂဲနစ်ဆက်သွယ်မှု, အလိုအလျောက်များနှင့်ပူးပေါင်း, စစ်မှန်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုဟာ9ပိတ်ပင်နည်းပြMasteries®နှင့်နည်းပြများ၏ပိတ်ပင်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်မှဗဟိုကြောင့်ဤမူဝါဒရှိနေပြီ။ ထို့ကြောင့်တိုင်း session တစ်ခုရှိသူတို့စစ်မှန်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှု၏အညွှန်းကိန်းကိုနားထောငျဖို့မျှော်လင့်ရသည်။
[prev-next-button-prev-url = "https://certifiedcoach.org/certification-and-development/get_mpdp/" next-url = "https://certifiedcoach.org/certification-and-development/cmc_mmc_sub/" prev-title = "MPDP အတည်ပြုချက်ရယူပါ" လာမည့်ခေါင်းစဉ် = "အသိအမှတ်ပြုကျွမ်းကျင်သောနည်းပြများနှင့် MMC တင်ပြမှု"]